बाहुबलीका हिरो प्रभासको विहे निश्चित, तर कोसँग ? « Anumodan National Daily
बाहुबलीका हिरो प्रभासको विहे निश्चित, तर कोसँग ?
प्रकाशित मिति : १८ जेष्ठ २०७४, बिहीबार १८:११
बाहुबलीका हिरो प्रभासलाई चाहने केटीहरु कति होलान् ? उनीहरु सबैलाई यो खबरले निराश बनाउने छ कि प्रभासले चाँडै नै बिहे गर्दैछन् ।
भारतीय मिडियाका अनुसार उनलाई रासी सिमेन्टका चेयरम्यान भूपति राजाकी नातिनीको प्रस्ताव आएको छ । र, दुवै परिवार यो सम्वन्धका लागि तयार भइसकेका छन् । प्रभासले पनि आफ्नो तर्फबाट बिहेको मन्जुरी दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
यद्यपि प्रभास र उनको परिवारको तर्फबाट यस विषयमा कुनै आधिकारिक भनाई सार्वजनिक भएको छैन । बाहुबली सिरीजमा लगभग पाँच वर्षसम्म व्यस्त रहेका प्रभासले अहिले ब्रेक लिएका छन् । उनी अहिले अमेरिकामा आफ्ना साथीहरुसँग छुट्टी मनाइरहेका छन् । उनी जूनको पहिलो साता भारत फर्किनेछन् ।
३७ वषिर्य प्रभासले अहिलेसम्म ६ हजार केटीहरुको बिहेको प्रस्ताव लत्याइसकेको खबर हालै मात्र मिडियाहरुमा आएको थियो । त्यसो त उनको नाम बाहुबली २ कि अभिनेत्री अनुष्का शेट्टीसँग जोडिदै आएको थियो । तर, अनुष्काले यसलाई अस्वीकार गरिसकेकी छिन् ।